Hogaamiye Shabaab oo la Dilay iyo Howlgal cir iyo dhul ah oo laga fuliyay Deegaanka Jilib Marka |
Hogaamiye Shabaab oo la Dilay iyo Howlgal cir iyo dhul ah oo laga fuliyay Deegaanka Jilib Marka
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya oo garab ka helayay ciidamo Mareykan ah ayaa howlgal cir iyo dhul ah waxa ay ka fuliyeen Deegaanka Jilib Marka oo katirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee dalka Mareykanka ayaa duqeeyeen saldhigyo la sheegay in Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Jilib-Marka, waxaana saldhigyadaasi lagu dhuftay dhowr gantaal.
Duqeynta kadib ayaa ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka waxa ay dhanka lugta ah ku galeyn deegaanka Jilib Marka, waxaana halkaasi ka dhacay iska hor imaad dhax maray ciidamada Huwanta iyo dagaalyahanada Al Shabaab.
Sargaal katirsan ciidanka Milatariga Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta dowlada ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay saraakiil iyo dagaalyahano badan oo katirsan Xarakada Al Shabaab .
Waxa uu sheegay sargaalkan xubnaha howlgalka lagu dilay in uu kamid ahaa Abuu Yaasiin Shiikh Maxamed uu sheegay in Al-shabaab u qaabilsanaa Amniyaadka gobolka shabellada Hoose iyo sargaal kale oo lagu magacaabo Maxamuud Abuu Xamza.
Sargaalkan katirsan Milatariga Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka kusoo furteen gaadiid dagaal ay lahaayeen Al Shabaab iyo sidoo kale hub kala duwan, waxa uuna xusay in weerarkan Al Shabaab jab xoogan uu kasoo gaaray.
Al Shabaab ayaan wali ka hadlin howlgalkan ciidamada huwanta ah ka fuliyeen deegaanka Jilib Marka, waxaana howlgalkan qeyb ka yahay howlgalo si joogta ah ay u fuliyaan ciidamada Kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka.